Chinja Dhawunorodha Nzvimbo Ye Windows Chengetedza Zvirongwa Mu Windows 10
Kungofanana neyekutanga desktop desktop, maapplication akaiswa kubva ku Windows Chitoro chakaiswa pane imwechete dhiraivha uko Windows 10 yakaiswa.
Zvese default maapplication uye maapplication akaiswa kubva kuChitoro anochengetwa mu "C: Chirongwa MafairaWindowsZvirongwa ”forodha. Iyo WindowsZvirongwa zvefaira hazvigone kuwanikwa pasina kushandura mvumo dzayo dzekutangira.
Kana yako PC's system inotya ichizadza nekukurumidza, unogona kutarisa kushandura nzvimbo isina kushandiswa inoshandiswa kuisa mapurogiramu kubva kuHiche. Iwe unogona kushandisa gwara rakasiyana-siyana kuti uise Mazvigadzirwa zveSitolo pamwe chete nemapurogiramu anenge atoiswa.
Ngatione maitiro ekushandura kurodha pasi uye nekuisa nzvimbo ye Windows Chengetedza maapplication mu Windows 10.
Cherechedza kuti zvizhinji zvezvibato zvinogona kuiswa pane isina-system drive. Zvisinei, mamwe mapurogiramu haagoni kuiswa kana kutamirwa kune imwe motokari kunze kwekutsvaga kwekushandisa. Kana purogiramu isingatsigeri kuisa pane kwete-system motokari, uchaona "Izvi zvinoda kuiswa panzvimbo yekutengesa"Shoko paunenge uchiedza kuisa app.
Shandura kushandiswa kusina kuiswa kwemafaira akaiswa kubva kuTitolo
Step 1: Enda kune Settings app> maitiro > chengetedzo peji.
Step 2: Mu Zvimwe zvekuchengetedza zvigadziri chikamu, chengeta pane Shandura apo zvinyorwa zvitsva zvakachengetedzwa kubatana.
Step 3: Mu Zvitsva mapurogiramu achachengetedza drop down box, sarudza motokari kwaunoda kuisa Store Store apps kubva zvino zvichienda. Dhinda iyo Shandisa bhatani.
Kubva ikozvino zvichienda, pose paunoshandisa matsva mapurogiramu (mapurogiramu anotsigira kwete-system drive) kubva kuHiche, nzvimbo itsva ichashandiswa kuiisa.
Windows 10 otomatiki inogadzira dhairekita inonzi WindowsZvirongwa pamudzi wedhiraivho yakasarudzwa uye inochengetedza ese akaiswa maapplication pasi peiyo folda.
Tungamira mapurogiramu akaiswa zvino
Kana iwe uine tani yemapurogiramu akaiswa kubva muHurumende, unogona kuvamisa kune imwe gwara pasina kudzorerazve. Zvakakosha kuziva kuti haisi ose mapurogiramu anobatsira anotamira kune imwe nzvimbo. Heino nzira yekuzviita nayo.
Step 1: Vhura purogiramu yaunoda kutamira kune imwe gwara. Enda ku Settings > Apps > Zvirongwa & maficha.
Step 2: Dzvanya purogiramu yechirongwa yaunoda kufamba. Kana iyo purogiramu inotsigira kuifambisa kune imwe nzvimbo, iwe uchaona Enda bhatani riri pedo naro pakutsvaga purogiramu.
Step 3: Click on Enda bhatani, sarudza motokari kwaunoda kuendesa purogiramu yacho, uye ipapo chengeta pa Enda bhatani zvakare kuti uende kune imwe nzvimbo panzvimbo itsva.
sei fambisa mapurogiramu akaiswa kune rimwe divi in Windows 10 mutungamiri anogona kukufarirawo.
Sei Kuwana WindowsZvirongwa zveFolder Mune Windows 10